3 codsiyo Android ah oo lagu tababaro jimicsiga | Androidsis
Barnaamijyada ugu fiican ee Android si loogu tababaro qolka jimicsiga
Eder Ferreno | | Codsiyada Android
Isticmaalayaal badan waxay aadaan jimicsiga si isdaba joog ah. In kasta oo tani ay xoogaa dhib ku tahay dadka cusub, maadaama ay muhiim tahay in la ogaado nashaad noocee ah ayaan sameynaa? Nasiib wanaag, waxaan haynaa codsiyo badan oo la heli karo oo naga caawiya wax badan oo arrintan la xiriira. Codsiyada loogu talagalay qalabka Android kaas oo lagu abuurayo waxqabadkeena caadiga ah.
Sidan oo kale, iyada oo ku saleysan waxa aan dooneyno inaan ku sameyno qolka jimicsiga, waxaan ku sameyn karnaa layliyo taxane ah ama joogtada ah ee ku habboon baahiyaheena. Hab fudud oo loo helo hage waxa ugu fiican ee aan ku sameyn karno qolka jimicsiga. Waxaan ubaahanahay kaliya taleefankeena Android.
Waxaa jira dad badan codsiyada isboortiga hadda loo heli karo qalabka Android. Kaliya fiiri Google Play. Laakiin, waxaan kaloo haysannaa kuwo badan oo na siiya howlo jimicsi. Ku habboon aad jimicsiga si aad u sameyso isboorti. Marka xigta, waxaan kaaga tagi doonaa xulashada codsiyada ugufiican qaybtaan. Sidaa darteed, aadista qolka jimicsigu waxay noqon doontaa wax aad u fudud oo raaxo leh.
1 Jimicsiga Jirdhiska & Jimicsiga
2 Jimicsiga Reada
3 Jimicsiga GYMG
Jimicsiga Jirdhiska & Jimicsiga
Waa codsi taas ayaa lagu dhiirrigeliyay Qalabka Naqshadeynta marka loo eego naqshadeynta. Waxaan dhihi karnaa dhiirigelin, sababtoo ah runti ma aysan guuleysan. Marka naqshadeynta waa la horumarin karaa, inkasta oo ay tahay mid hadda socota. Wax ka dhigaya isticmaalkiisa mid aan aad u murugsaneyn. Codsigan wuxuu na siinayaa a hagida jimicsiyada loo abaabulay kooxaha muruqyada.
Qaabka jimicsiga loo soo bandhigo ayaa ah muuqaal iyo fudeyd la raaco Loogu talagalay dadka isticmaala. Waxaan sidoo kale leenahay noocyo kala duwan jadwalka la heli karo Jadwal kasta waxaa loo qaybiyaa hadba ujeeddada iyo dhibaatada. Intaas waxaa sii dheer, waxay na siineysaa ikhtiyaarka ah inaan awoodno abuurno howlo noo gaar ah. Tan awgeed waa inaan doorannaa laylisyada ku kaydsan keydka macluumaadka. Intaas waxaa sii dheer inay tahay inaad sameyso jadwal / xusuus-qor.
Muuqaal kale oo aad u xiiso badan ee codsigan loogu talagalay Android waa taas wuxuu leeyahay qayb nafaqada leh. Waxaan la kulmaynaa a taxane ah oo cuntooyinka ku saleysan qiimahooda kalooriga ah. Sidoo kale sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan nafaqada la heli karo. Marka, iyadoo kuxiran ujeeddada aan leenahay, waxaan heli karnaa cunto ku habboon baahiyahaas.
Jimicsiga Jirdhiska & Jimicsiga ayaa loogu heli karaa Android bilaash. Noocan bilaashka ah waxaan haysannaa dhammaan howlaha lagama maarmaanka ah. In kastoo haddii aan dooneyno wax badan, waan ku furi karnaa innagoo bixinayna 2,69 euros.
Tababbarka Jimicsiga & Jimicsiga
Developer: Jimicsiga Jimicsiga Jirdhiska
Codsi ah waxay u taagan tahay naqshad aad u nadiif ah, fudud oo dareen leh. Marka in laga gudbo waa wax aad u fudud. Waxaan mar kale la kulannaa isla qeybaha sidii codsigii hore: Jimicsi, jimicsi iyo nafaqo.
Haddana waan awoodnaa Xullo jimicsi ama jimicsi ku saleysan yoolalkayaga. Dareenkaas, si dhib leh ayey isku beddelaysaa marka loo eego codsigii hore. Halka aan ka heli karno farqi weyn ayaa ka jira qaybta nafaqada. Qeybtaan waan awoodnaa geli xogteena. Sidaa awgeed, macros-ka aan u baahan nahay inaan ku quudno gaadho yoolka in aan calaamadinay.
Tani Codsiga Android waa mid ku habboon in lala socdo quudintayada. Hawlaha intiisa kale waxay la mid yihiin codsiyada kale ee liiska ku jira. Waxaan ku soo dejisan karnaa bilaash taleefankeena.
Waa a codsi aad u fudud oo aad u faa'iido badan. In kasta oo ay haysato dhibaato yar oo weyn, taas oo ah naqshadeeda. Codsigu uma qurux badna sida kuwa kale. Laakiin, haddii taasi aysan muhiim ahayn, waxaa na horyaalla ikhtiyaar wanaagsan oo la tixgeliyo.
Haddana waanu kulmi doonaa saddex qaybood: Jimicsiyo, jimicsiyo joogto ah iyo nafaqo. Qeybta jimicsiga waxaan ka helnaa a liiska kooxaha muruqyada. Marka jimicsiyada waxaa loo abaabulay sida ay qabaan kooxahan. Waa ku filan in la doorto koox muruq ah waxaanan heleynaa dhammaan liiska jimicsiyada noocaas ah.
ka Hawlaha caadiga ah waxaa horeyba loo abaabulay maalmaha usbuuca. Mid kasta gudahiisa waxaan ka helaynaa layliyo taxane ah. Intaa waxaa dheer, waxaan haynaa tilmaamo taxane ah oo sharxaya layli kasta. Way fududahay in la raaco, laakiin waxtar badan ayey leeyihiin. Haddii aan rabno inaan adeegsanno qaybta nafaqada, waa inaan soo dejiso nooca la bixiyay ee codsigan Android ah by 3,59 euros.
FAYSIDKA GYMKA & SHAQADA
Developer: Jimicsiga Jimicsiga GYM
Sida aad u arki karto, waxaa jira xulashooyin aad u xiiso badan oo ka mid ah barnaamijyadan. Mahadsanid iyaga, aadista qolka jimicsiga ma noqon doonto mid aad u dhib badan. Tan iyo markii aan lahaan doonno hagaha saxda ah ee taleefankeena Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Barnaamijyada ugu fiican ee Android si loogu tababaro qolka jimicsiga
Sifeeyay naqshadda dhameystiran ee Alcatel 5